Fifampitifirana tetsy Antsahamanitra sy tetsy Ampefiloha: jiolahy roa lavon’ny Sag, polisy roa lahy naratra | NewsMada
Nanohitra avy hatrany tamin’ny alalan’ny tifitra ireto jiolahy raha vao nahita ireo polisin’ny Sag. Raikitra ny fifanjevoana ka lavo voatifitra teo Antsahamanitra ny iray, raha tavela tetsy Ampefiloha ny faharoa. Saika hanafika olona nitondra vola harotsaka any amin’ny banky ireto jiolahy ireo.
Nandriaka ny ra! Nirefodrefotra ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisin’ny Sag, omaly maraina tamin’ny 9 ora sy 15 mn teny Antsahamanitra sy teny Ampefiloha. Vokany, jiolahy roa indray rotiky ny balan’ny polisy, basy PA iray niaraka tamin’ny bala telo tratra teny amin’izy ireo. Nisavoritaka ny olona teny amin’ny manodidina an’Antsahamanitra hatreny Antaninarenina sy teny Ampefiloha iny nandritra ny fifanenjehan’ireo jiolahy nandeha moto sy ny polisy nanao fanamiana sivily sady nisaron-tava. Toy ireny amin’ny horonantsarimihetsika ireny mihitsy ny zava-nisy teny an-toerana, araka ny fanazavan’ireo olona nanatri-maso ny zava-nitranga. Araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena (DGPN), ny contrôleur général de police, Rakotozanany Dany Marius, miisa 12 ireto tambajotran-jiolahy ireto ary samy manana ny anjara asany avy. Miisa efatra ny vehivavy raha lehilahy kosa ny ambiny. Olona nandeha fiara handrotsaka vola any amin’ny banky no narahin’ireto jiolahy ireto ary nikasa handroba izany izy ireo.
Polisy roa lahy naratra nandritra ny fifampitifirana…
Mampiasa moto Cross iray sy Scooter iray ary Bol d’Or roa ireto jiolahy ireto sady manao taingon-droa. Asan’ireo vehivavy ny mitazona ny fitaovam-piadiana ary manolotra ny basy amin’ireo lehilahy izy ireo rehefa hanatanteraka ny asa ratsy. Niakatra an’Antsahamanitra ilay olona nitondra fiara ka teo no saika hanatanterahan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Efa niatrana teny an-toerana anefa ny polisy tamin’io fotoana io. Nitifitra avy hatrany ireo jiolahy ka lavo teo ny iray. Nitsoaka ireo namany ka raikitra teo ny fifanenjehana ary teny amin’ny lalamby Ampefiloha no lavon’ny polisy ny jiolahy iray faharoa. Tafaporitsaka ireo jiolahy roa hafa. Naratra kosa ny polisy roa lahy nandritra ny fifandonana tamin’ireto jiolahy ireto. Nambaran’ny DGPN hatrany fa jiolahy efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela ary malaza ratsy amin’ny fanafihana mitam-piadiana sy tambajotran-jiolahy ireto voatifitra ireto.